အလုပ်အင်တာဗျူး ဖြေတဲ့အချိန် ကိုယ့်ကိုကိုယ်ယုံကြည်မှုရှိဖို့ ဘယ်လိုလုပ်ရမလဲ? – MyStyle Myanmar
အလုပ်အင်တာဗျူး ဖြေတဲ့အချိန် ကိုယ့်ကိုကိုယ်ယုံကြည်မှုရှိဖို့ ဘယ်လိုလုပ်ရမလဲ?
MyStyle Myanmar ပရိတ်သတ်တို့အားလုံးမင်္ဂလာပါနော်။ အလုပ်တစ်ခု လျှောက်တဲ့အချိန် တော်တော်များများ အင်တာဗျူး ဖြေရမှာပါ။ အလုပ်ရှင်တွေက သူတို့မေးတဲ့အရာတွေကို သွက်သွက်လက်လက်နဲ့ ဖြေနိုင်သူတွေ၊ ကိုယ့်ကိုကိုယ် ယုံကြည်မှုရှိသူတွေကို ပိုသဘောကျကြပါတယ်။ လစာကောင်းပြီး အလုပ်ရဖို့ ခက်ခဲတဲ့ အလုပ်လျှောက်သူများတဲ့ နေရာမျိုးမှာ ကိုယ့်ကိုကိုယ် ယုံကြည်မှုရှိဖို့က အရေးပါလာပါပြီ။ ကိုယ့်ကိုကိုယ် ယုံကြည်မှုရှိသူက ကြောက်တတ်သူထက် နှာတစ်ဖျားသာပါတယ်။ ဒါကြောင့် အလုပ်အင်တာဗျူး ဖြေမယ့်လူတိုင်း သိထားသင့်ပါတယ်။ အင်တာဗျူးမှာ ကိုယ့်ကိုကိုယ် ယုံကြည်မှုရှိစေမယ့် အချက်တွေကတော့-
၁။ ပွဲမဝင်ခင် အပြင်ကကျင်းပပါ
ကုမ္ဗဏီက ကိုယ့်ကိုမေးနိုင်တဲ့ အချက်ကို ကြိုချရေးကြည့်ပါ။ ဒီမေးခွန်းတွေကို ဖြေကြည့်ပါ။ ကိုယ်လုပ်မယ့် နေရာအကြောင်းကို သေချာစုံစမ်းပါ။ သူတို့က ဘယ်လိုမျိုးကို သဘောကျလဲ ကြိုလေ့လာပါ။ ကြိုလုပ်ထားတာက ကိုယ့်ကိုကိုယ် ယုံကြည်မှုတိုးစေပါတယ်။
သင်သိထားဖို့က သင့်ရှေ့မှာ မေးတဲ့လူက သာမန်လူပါပဲ။ သင့်ဘဝရဲ့ တစ်ခုတည်းသော မျှော်လင့်ခြင်းရောင်ခြည်တန်းမဟုတ်ပါဘူး။ မေးတဲ့လူကို မကြောက်ပါနဲ့။ မှားမှာလည်းမကြောက်ပါနဲ့။ ရဲရဲဝံ့ဝံ့သာ ဖြေလိုက်ပါ။
၃။ အင်တာဗျူးမဖြေခင်မနက်မှာ လေ့ကျင့်ခန်းလုပ်ပါ
လေ့ကျင့်ခန်းလုပ်တာက ဦးနှောက်အတွက် ကောင်းမွန်စေပြီး သွေးလည်ပတ်မှုအတွက် အကျိုးရှိပါတယ်။ ပျော်ရွှင်စေတဲ့ဟော်မုန်းကိုလည်း ထုတ်ပေးပါတယ်။ ဒီတော့ အင်တာဗျူး မဖြေခင် မနက်စောစောထပြီး နာရီဝက်လောက် လေ့ကျင့်ခန်းလုပ်လိုက်ပါ။ သင်တက်ကြွနေပါလိမ့်မယ်။
၄။ သင့်အားနည်းချက်တွေ အပြစ်တွေကို မတွေးပါနဲ့
ငါ့အသံက နားထောင်မကောင်းဘူး၊ ငါ့ပုံစံနဲ့ အဆင်ပြေပါ့မလား စတဲ့ကိုယ့်အပြစ်တွေကို မတွေးပါနဲ့။ ပရော်ဖက်ရှင်နယ်ဆန်ဆန် ရိုးရိုးရှင်းရှင်းလေး ဝတ်သွားပါ။ အင်တာဗျူးတဲ့နေရာကိုရောက်တာနဲ့ သူတို့မေးတဲ့မေးခွန်းကိုပဲ အာရုံစိုက်ပါ။ ကိုယ့်အပြစ်တွေကို တွေးနေလို့ ဘာမှမထူးပါဘူး။
အင်တာဗျူးအခန်းထဲကို ရောက်တာနဲ့ သူတို့ကို စပြီးတော့ နှုတ်ဆက်ပါ။ ဖြစ်နိုင်ရင် လက်ဆွဲနှုတ်ဆက်လို့လည်း ရပါတယ်။ မင်္ဂလာပါဆိုတဲ့ စကားလေးနဲ့ အင်တာဗျူးကို စတင်လိုက်ပါ။
သူတို့ကို နှုတ်ဆက်ပြီးတာနဲ့ သူတို့ဘက်က စကားစလာဖို့ စောင့်ပါ။ မေးတဲ့မေးခွန်းတွေကို တိတိကျကျနဲ့ မြန်မြန်ဆန်ဆန်ဖြေပေးပါ။
၇။ အလုပ်ရနေတဲ့ ပုံစံမျိုးနဲ့ပြောပါ
ဒါက ကိုယ့်ကိုကိုယ် အထင်ကြီးဘဝင်မြင့်တာနဲ့ မတူပါဘူး။ ကိုယ်သာ အလုပ်ကို ရခဲ့ရင် ဘယ်လိုလုပ်မလဲဆိုတာကို ယုံကြည်မှုရှိရှိပြောပါ။ ကိုယ့်ဘက်က အလုပ်ရနေပြီလို့ အပြည့်အဝယုံကြည်စိတ်နဲ့ပြောပါ။
၈။ သင့်ရဲ့ Resume ကိုယူသွားပါ
တစ်ခါတလေ သူတို့ဘက်က ကျန်ခဲ့တာတွေ၊ ပျောက်နေတာတွေရှိတတ်ပါတယ်။ ဒီတော့ သင်က အလုပ်လျှောက်လွှာရေးကတည်းက ကြိုပြီး Copy တစ်ရွက်ပြင်ဆင်ထားပါ။ အမှားအယွင်းမရှိတာ အကောင်းဆုံးပါပဲ။
အင်တာဗျူးသွားတဲ့အချိန် ဘာမှမစားဘဲ မသွားပါနဲ့။ ဖြေတဲ့အချိန် အားရှိဖို့ အစာစားရပါမယ်။ သကြားများတဲ့အစားအစာတွေကို ရှောင်ပါ။ အဆီများတာတွေရှောင်ပါ။ သကြားမပါတဲ့ ကော်ဖီတစ်ခွက်သောက်ပါ။ ကော်ဖီမကြိုက်ရင် သံပယိုရည်ဖြန်းထားတဲ့ Green Tea လေးသောက်လိုက်ပါ။
MyStyle Myanmar ပရိတျသတျတို့အားလုံးမင်ျဂလာပါနျော။ အလုပျတဈခု လြှောကျတဲ့အခြိနျ တျောတျောမြားမြား အငျတာဗြူး ဖွရေမှာပါ။ အလုပျရှငျတှကေ သူတို့မေးတဲ့အရာတှကေို သှကျသှကျလကျလကျနဲ့ ဖွနေိုငျသူတှေ၊ ကိုယျ့ကိုကိုယျ ယုံကွညျမှုရှိသူတှကေို ပိုသဘောကကြွပါတယျ။ လစာကောငျးပွီး အလုပျရဖို့ ခကျခဲတဲ့ အလုပျလြှောကျသူမြားတဲ့ နရောမြိုးမှာ ကိုယျ့ကိုကိုယျ ယုံကွညျမှုရှိဖို့က အရေးပါလာပါပွီ။ ကိုယျ့ကိုကိုယျ ယုံကွညျမှုရှိသူက ကွောကျတတျသူထကျ နှာတဈဖြားသာပါတယျ။ ဒါကွောငျ့ အလုပျအငျတာဗြူး ဖွမေယျ့လူတိုငျး သိထားသငျ့ပါတယျ။ အငျတာဗြူးမှာ ကိုယျ့ကိုကိုယျ ယုံကွညျမှုရှိစမေယျ့ အခကျြတှကေတော့-
၁။ ပှဲမဝငျခငျ အပွငျကကငျြးပပါ
ကုမ်ဗဏီက ကိုယျ့ကိုမေးနိုငျတဲ့ အခကျြကို ကွိုခရြေးကွညျ့ပါ။ ဒီမေးခှနျးတှကေို ဖွကွေညျ့ပါ။ ကိုယျလုပျမယျ့ နရောအကွောငျးကို သခြောစုံစမျးပါ။ သူတို့က ဘယျလိုမြိုးကို သဘောကလြဲ ကွိုလလေ့ာပါ။ ကွိုလုပျထားတာက ကိုယျ့ကိုကိုယျ ယုံကွညျမှုတိုးစပေါတယျ။
သငျသိထားဖို့က သငျ့ရှမှေ့ာ မေးတဲ့လူက သာမနျလူပါပဲ။ သငျ့ဘဝရဲ့ တဈခုတညျးသော မြှျောလငျ့ခွငျးရောငျခွညျတနျးမဟုတျပါဘူး။ မေးတဲ့လူကို မကွောကျပါနဲ့။ မှားမှာလညျးမကွောကျပါနဲ့။ ရဲရဲဝံ့ဝံ့သာ ဖွလေိုကျပါ။
၃။ အငျတာဗြူးမဖွခေငျမနကျမှာ လကေ့ငျြ့ခနျးလုပျပါ
လကေ့ငျြ့ခနျးလုပျတာက ဦးနှောကျအတှကျ ကောငျးမှနျစပွေီး သှေးလညျပတျမှုအတှကျ အကြိုးရှိပါတယျ။ ပြျောရှငျစတေဲ့ဟျောမုနျးကိုလညျး ထုတျပေးပါတယျ။ ဒီတော့ အငျတာဗြူး မဖွခေငျ မနကျစောစောထပွီး နာရီဝကျလောကျ လကေ့ငျြ့ခနျးလုပျလိုကျပါ။ သငျတကျကွှနပေါလိမျ့မယျ။
၄။ သငျ့အားနညျးခကျြတှေ အပွဈတှကေို မတှေးပါနဲ့
ငါ့အသံက နားထောငျမကောငျးဘူး၊ ငါ့ပုံစံနဲ့ အဆငျပွပေါ့မလား စတဲ့ကိုယျ့အပွဈတှကေို မတှေးပါနဲ့။ ပရျောဖကျရှငျနယျဆနျဆနျ ရိုးရိုးရှငျးရှငျးလေး ဝတျသှားပါ။ အငျတာဗြူးတဲ့နရောကိုရောကျတာနဲ့ သူတို့မေးတဲ့မေးခှနျးကိုပဲ အာရုံစိုကျပါ။ ကိုယျ့အပွဈတှကေို တှေးနလေို့ ဘာမှမထူးပါဘူး။
အငျတာဗြူးအခနျးထဲကို ရောကျတာနဲ့ သူတို့ကို စပွီးတော့ နှုတျဆကျပါ။ ဖွဈနိုငျရငျ လကျဆှဲနှုတျဆကျလို့လညျး ရပါတယျ။ မင်ျဂလာပါဆိုတဲ့ စကားလေးနဲ့ အငျတာဗြူးကို စတငျလိုကျပါ။
သူတို့ကို နှုတျဆကျပွီးတာနဲ့ သူတို့ဘကျက စကားစလာဖို့ စောငျ့ပါ။ မေးတဲ့မေးခှနျးတှကေို တိတိကကြနြဲ့ မွနျမွနျဆနျဆနျဖွပေေးပါ။
၇။ အလုပျရနတေဲ့ ပုံစံမြိုးနဲ့ပွောပါ
ဒါက ကိုယျ့ကိုကိုယျ အထငျကွီးဘဝငျမွငျ့တာနဲ့ မတူပါဘူး။ ကိုယျသာ အလုပျကို ရခဲ့ရငျ ဘယျလိုလုပျမလဲဆိုတာကို ယုံကွညျမှုရှိရှိပွောပါ။ ကိုယျ့ဘကျက အလုပျရနပွေီလို့ အပွညျ့အဝယုံကွညျစိတျနဲ့ပွောပါ။
၈။ သငျ့ရဲ့ Resume ကိုယူသှားပါ
တဈခါတလေ သူတို့ဘကျက ကနျြခဲ့တာတှေ၊ ပြောကျနတောတှရှေိတတျပါတယျ။ ဒီတော့ သငျက အလုပျလြှောကျလှာရေးကတညျးက ကွိုပွီး Copy တဈရှကျပွငျဆငျထားပါ။ အမှားအယှငျးမရှိတာ အကောငျးဆုံးပါပဲ။
အငျတာဗြူးသှားတဲ့အခြိနျ ဘာမှမစားဘဲ မသှားပါနဲ့။ ဖွတေဲ့အခြိနျ အားရှိဖို့ အစာစားရပါမယျ။ သကွားမြားတဲ့အစားအစာတှကေို ရှောငျပါ။ အဆီမြားတာတှရှေောငျပါ။ သကွားမပါတဲ့ ကျောဖီတဈခှကျသောကျပါ။ ကျောဖီမကွိုကျရငျ သံပယိုရညျဖွနျးထားတဲ့ Green Tea လေးသောကျလိုကျပါ။
MyStyle Myanmar2019-12-14T07:19:26+06:30December 8th, 2019|Lifestyle, အထှထှေေ ဗဟုသုတ – General Knowledge|